Ny zavatra rehetra ilainao hanatsarana tanteraka ny Xiaomi Mi4c | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Android Root, Tutorials, Xiaomi
Vao avy nividy marika Mi4c vaovao ve ianao? Raha izany, androany dia tiako ny hampiseho anao amin'ity lesona azo ampiharina vaovao ity izay ilainao rehetra hanaovana ny Xiaomi Mi4c, Root, TWRP Recovery ary Rom tanteraka amin'ny Espaniôla ary diovy ireo junk Apps rehetra ireo izay tonga dia apetraka mialoha ao amin'ity terminal Xiaomi manaitra ity fifaninanana mazava avy amin'ny Nexus 5X vao nampidirina miaraka amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny terminal Google.
Ity fampianarana azo ampiharina ity, izay misy horonantsary manazava telo, dia ho afaka hanatanteraka ny Xiaomi Mi4c tsy mila mampiasa PC na hampiasa baiko sarotra na ilay antsoina hoe mode ADB na FastBoot. Noho izany, manaraka ny torolalana izay faritako eto tsikelikely dia ho azonao izany Root ny Xiaomi Mi4c, Ampidiro ny TWRP Recovery amin'ny Xiaomi Mi4c ary farany ampidiro ny Romana Miui V7 Weekly Rom farany miaraka amin'ny Root ary fandidiana sy fampisehoana miavaka izay manome isa azy amin'ny fitsapana AnTuTu ambonin'ny isa 50.000 XNUMX. Fantatrao izao, raha te handao ny anao ianao manatsara ny Xiaomi Mi4c hatramin'ny farany ambony, miorim-paka ary tanteraka amin'ny teny Castilian, manoro hevitra anao aho mba tsy ho very an-tsipiriany amin'izay rehetra hazavaiko eto.
Alohan'ny hanombohana an'ity tutorial azo ampiharina hanatsarana tanteraka ny Xiaomi Mi4c, Mila milaza izany aminao aho Tsy ho very ny fampiharana manokana na ny angon-drakitra alaina, noho izany dia tsy mila manao kopia backup amin'ny apps apetrakao akory ianao satria amin'ny faran'ny dingana fahatelo, izany hoe, amin'ny faran'ny fampianarana dia hijanona ho toy ny tsy misy ao amin'ny Xiaomi Mi4c azy ireo tsirairay avy. .
1 Dingana 1 - Root ny Xiaomi Mi4c miaraka amin'ny Rom iraisam-pirenena.
2 Dingana 2 - Atsofohy ny TWRP amin'ny Xiaomi Mi4c tsy mila PC
3 Dingana 3 - Manaparitaka ny Miui V7 Eoropeana Rom faramparany amin'ny fiteny espaniola ary madio tanteraka amin'ny junk Apps
Dingana 1 - Root ny Xiaomi Mi4c miaraka amin'ny Rom iraisam-pirenena.
Amin'ity dingana voalohany ity Hongotantsika ny Xiaomi Mi4c miaraka amin'ity Rom iraisam-pirenena ity izay tsy manana ny teny Espaniôla fa hampiasainay ho tetezana hahafahana mamaka ny terminal ary afaka mametraka Flashify, rindranasa izay ahafahantsika mamelatra amin'ny dingana manaraka dia tsy mila solosaina manokana na baiko ADB na fastboot na zavatra hafa toa izany, ny TWRP amin'ny Xiaomi Mi4c.
Ny rakitra Rom hanaraka ny dingana amin'ity horonantsary voalohany apetako eo ambonin'ireto tsipika ireto dia ho azonao atao misintona avy amin'ity rohy ity ihany. Raha vao sintonina ianao maka tahaka azy tsy decompressing ao anaty lahatahiry Xiaomi Mi4c anao ary araho ny dingana ao amin'ilay horonan-tsary.
Dingana 2 - Atsofohy ny TWRP amin'ny Xiaomi Mi4c tsy mila PC
Amin'ity dingana faharoa ity dia hampidininay ny rindranasa Flashify amin'ity rohy ity ihany ary apetrakay ary hanome fahazoan-dàlana ho an'ny Root izahay rehefa manazava ao amin'ilay horonan-tsary ambonin'ireo tsipika ireo fotsiny. Aorian'izay dia hampidina ireo rakitra rehetra ao amin'ity fampirimana ity izay ampiantranoina ao amin'ny MEGA, rakitra mifanaraka amin'ny Fanarenana TWRP an'ny Xiaomi Mi4c ary hapetrantsika izy ireo ao anatin'ny fampirimana tadiavintsika ao amin'ny fitadidiana fitahirizana ny Xiaomi Mi4c anay.
Avy eo isika dia hanana izany araho ny dingana voalaza ao amin'ilay horonan-tsary.
Dingana 3 - Manaparitaka ny Miui V7 Eoropeana Rom faramparany amin'ny fiteny espaniola ary madio tanteraka amin'ny junk Apps
Amin'ity dingana fahatelo sy farany ity dia hahatratra a Xiaomi Mi4c amin'ny fiteny espaniola tanteraka, miorim-pakaamin'ny TWRP Recovery, tsy misy PUA ary nohamarinina tanteraka hanaovana fampisehoana mahatalanjona. Ho vitanao ny mamita ilay rom misintona avy amin'ity rohy ity, raha vao sintonina, raha nahavita izany tamin'ny alàlan'ny PC ianao dia tsarovy ny mandika azy amin'ny fahatsiarovan'ny Xiaomi Mi4c tsy mila decompressing. Avy eo ianao dia tsy maintsy manaraka ireo dingana hazavaiko ao amin'ilay horonantsary izay eo ambonin'ireto tsipika ireto ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hanatsarana tanteraka ny Xiaomi Mi4c, Root, TWRP Recovery ary Rom tanteraka amin'ny teny Espaniôla sy madio amin'ny junk Apps
Asa tsara. MISAOTRA
horonan-tsary tena tsara, nohazavaina tsara kokoa ... Efa nametraka ny rom tamin'ny Espaniôla aho ary ny version 5.10.8 fa raha manome vaovao aho dia milaza amiko fa tsy misy fanavaozana. Raha omeko ireo teboka telo etsy ambony ireo ary misintona rom dia mampidina an'io ihany izy, izany hoe tsy mametraka ny fanavaozana 5.10.16 amin'ny alàlan'ny OTA. Raha te-hametraka ny fanavaozana aho, tokony hanao ny dingana rehetra amin'ny kinova 5.10.16 na ny dingana farany ihany, ny kinova espaniola ihany ve no apetraka amin'ny 5.10.16? Misaotra anao.
Miasa miaraka amin'ity ROM ity ve ny radio? Vao nividy mi4c aho ary tsy mandeha ny app FM Radio, voalaza fa tsy afaka mampiasa Radio ilay fitaovana.
Miala tsiny fa nividy vary mena 1s ny zanako lahy ary hatramin'ny voalohany dia mihinana bateria be dia be izy ary tsy afaka manavao ilay rom satria rehefa mandeha any amin'ny menio fanovana aho ary mankany amin'io safidy io dia averiko hatrany hatrany amin'ny efijery an-trano, azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza no ahitako tutorial hiorina, hametahana twrp ary hanavao ny rom -amin'izay azo atao- ao amin'io terminal io?
Miala tsiny amin'ny tsy fahalalako, fa novidiko ny mi4c izay tonga amin'ny teny anglisy sy sinoa ary rehefa manaraka ny tutorial aho amin'ny dingana faharoa dia omeko ny rohy hampidinana flashify (amin'ny telefaona iray ihany) ary mahazo hafatra "App tsy hita" aho.
Notadiaviko tao amin'ny Google izany ary nangataka ahy izy hiditra ny kaonty gmail ahy hampidinana azy ao amin'ny Google play Store saingy inona no nahagaga ahy rehefa nakarina tany amin'ny findaiko sy tablette sony ilay fampiharana, fa tsy tao Xiaomi.
Mba misy afaka manome tanana ahy azafady ??
Mieritreritra ny hividy an'ity terminal ity aho saingy azoko tsara fa tsy mitondra ny fampiharana Google na ny play Store napetraka izy io. Marina izany?
Miaraka amin'ny fomba hazavainao eto, mety ho izany ve? Miala tsiny raha hadalana ny fanontaniana fa tsy mahafehy betsaka ny tontolon'ny android aho. Miarahaba sy miarahaba anao amin'ny lahatsoratra
Efa tonga tamiko ny Play Store napetraka, na dia tsy tonga miaraka aminy aza io fomba io dia avelanao hadio sy hadio ary hohatsaraina hatramin'ny farany indrindra ao anatin'izany ny Play Store napetraka.
Moa ve mifanentana amin'ireo fizarana ram 32GB sy 3GB an'ny MI4c ireo koa ireo fomba fanao flashing sy rom?
Salama, ilaina ve ity fomba fiasa ity ho an'ny ondrilahy Xiaomi mi4i 16GB sy 2GB? Azoko tsara fa saingy mety mila mampiasa kinova hafa aho, afaka manampy ahy ve ianao? Misaotra betsaka.
Salama tsara, vao nahazo ny mi4c xiaomi 32 GB aho ary mandeha tsara izany afa-tsy ny olan'ny olana sasany toy ny amin'ny fampiharana youtube na amin'ny fampiharana hafa, hamaha ity dingana ity ve izy ireo? Ary azonao antoka ve fa tsy hanaisotra ny fiantohana?
Mazava ho azy fa ho voavaha izy ireo ary tsy ho very antoka ianao satria ROM XIAOMI ofisialy.
Miarahaba namana ary mankafy ny sombin-kazo izay novidinao.
Misaotra betsaka, lahatsoratra tsara sy horonan-tsary mahafinaritra, tsara izao ho ahy ny finday, voavaha daholo ny olana ary mpampiasa root koa aho. Tena mora ny fizotrany ary nohazavaina tsara, arahaba tsara!
Miguel Deogracias dia hoy izy:
Salama, te hanontany anao fanontaniana roa aho. Izaho dia nametraka kinova 22 ary ny marina dia tonga lafatra izy io afa-tsy ny fiantsoana feo an'i google izao izay tsy mandeha (ankoatry ny radio). Fiasa izay ampiasako betsaka hiantsoana rehefa mitondra fiara aho ary toa zava-dehibe amiko ny marina. Ny fanontaniako dia:
1.- Ny olako ihany ve sa ankapobeny?
2.- Mba hametrahana ny fanavaozana (efa misy 29) dia tsy maintsy apetrakaiko ny iraisampirenena ary avy eo ny libra no voalohany na amin'ny fametrahana ity farany miaraka amin'ny TWRP mety ve izany?
Misaotra betsaka mialoha, arahaba.
Valiny tamin'i Miguel Deogracias
Sergio Alvarez placeholder image dia hoy izy:
Manana ny mi4c prime aho ary rehefa misintona ilay rakitra voageja hanana ny recovery.img dia mahazo fanarenana roa aho… ny iray antsoina hoe recoverydev.img ary ny iray antsoina hoe recoverystd.img. Efa nanandrana nametraka azy roa aho, fa rehefa miverina amin'ny laoniny fanarenana indray aho ary miseho ilay efijery ahodinanao ny rantsan-tananao, raha tsy mandeha io slide io ary tsy afaka manohy aho. Azonao ampitaina amiko ve ny zipo mba hahalalako raha mandeha tsara ny fametrahana ny fanarenana anao? Misaotra
Valiny tamin'i Sergio Alvarez
Tokony ho torpedo ianao raha mampakatra ny rakitra amin'ny mega ary mila mampidina azy ireo amin'ny finday vaovao izay tsy manana ny fampiharana, na manokatra ny fampiharana mega ireo rohy.
Valio ny sainam-pirenena
Vao avy nahazo ny Xiaomi Mi4C aho ary tsy mahita ny WiFi ao an-tranoko, inona izany? Ahoana no fomba fisintomana ny dingana voalohany amin'izany?
Manana olana aho, ao miui ny whatsapp rehefa tsy miasa ny finday dia lasa amin'ny mode "matory"? Manana ny mi4c aho ary nametraka an'ity ROM ity aho satria nanana an'io olana io ary tsy afaka namaha azy, ary ankehitriny miaraka amin'ity ROM ity dia mitohy ny zava-mitranga amiko, tsy mahazo whats na mailaka aho raha maty ny telefaona . Misy vahaolana ve? Niezaka ihany koa aho tamin'ny fampandehanana ny autostart fa tsy nisy.
Tena tsara. Manana olana aho amin'ny dingana faharoa rehefa tsindrio ny rohy voalaza dia tsy hitako ny hafatry ny fampiharana. misy afaka manampy ahy amin'ity olana ity.
Lups dia hoy izy:
Tena tsara !! Fanampiana lehibe. Misaotra betsaka tamin'ity lesona ity. Manana fisalasalana aho. Inona no tsy maintsy hataontsika raha manohy manavao ny finday isika rehefa mivoaka ny fanavaozana bebe kokoa? Ny finday dia mahita azy ireo irery ary tsy maintsy manaiky ny fanavaozana azy ireo isika? sa tsy maintsy ataontsika daholo ireo dingana rehetra ato amin'ity lesona ity sa ny sasany fotsiny?
Misaotra betsaka mialoha !!
Mamaly an'i Lups
chemakan dia hoy izy:
Misaotra anao milina! Amin'ny fampianarana toy izao dia azonao antoka fa tsy hanao biriky ny telefaona ianao! Amin'ny fomba Lups, ny telefaona dia mahatsikaritra ireo fanavaozana. Salama2 !!
Mamaly an'i chemakan
XakeX dia hoy izy:
Tsara, tonga tamiko ihany koa izy io miaraka amin'ny rom rom efa napetraka sy fampiharana sinoa marobe ary taorian'ny fisintomana ilay rom tamin'ny dingana voalohany sy fanatanterahana azy dia nahazo efijery vetivety aho rehefa nanomboka indray fa tsy ny mariky ny fandrosoana amin'ny endrika ny faribolana Maharitra ny 9 minitra, ary manaraka ny bara fandrosoana hafa mandra-panombohan'ny finday ara-dalàna. Noho ny hafitsoky ny fizotrany dia efa maimbo aho fa misy zavatra tsy mety ary izao dia manohy amin'ireo fampiharana sinoa rehetra sy amin'ny MIUI 7.5.10.8 kinova Beta.
Inona no tokony hataoko mba hanarahana ny lesona ary hampandeha azy tsara? Miala tsiny fa vaovao aho ary izany no antony nisafidianako an'ity lesona ity. Misaotra.
Mamaly an'i XakeX
Niezaka ny hanao izay lazainao amin'ny horonantsary aho, nampidina ny zava-drehetra aho, saingy rehefa mandeha amin'ny app fanavaozana aho dia omeko ireo teboka telo rehefa misafidy fonosana fanavaozana dia mivoaka amin'ny fampiharana aho ary tsy afaka mifidy na inona na inona. Ny kinovan'ny miui tonga amiko amin'ny mi4c dia 77.0.4.0 ho fanampiana. Ahoana no ahafahako manamboatra azy, fiarahabana ary tuto tsara.
Pepe6543 dia hoy izy:
Fanontaniana ho an'ny olona iray nahavita azy: misy fiteny hafa tsy an'ny Espaniôla ve ny ROM, toa ny Basque, Galisiana na Catalan? Misaotra!
Valiny amin'i Pepe6543
Paul G dia hoy izy:
Tsara. Ao amin'ny mpamoaka vaovao dia mahazo kinova vaovao aho. Raha hanavao ny MI4C antsika izao, ahoana no fomba hanaovantsika azy? Amin'ny alàlan'ny fampiharana na avereno ny dingana amin'ny horonantsary faha-2 ampiasao ny Recovery ??
Misaotra betsaka tamin'ity fandraisana anjara sy fanampiana lehibe ho an'ireo mpampiasa MI4C vaovao ity.
Valiny tamin'i Pablo G
Via updater dia ampy.
Imanol dia hoy izy:
Tsara tolakandro Francisco,
Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny fampianarana nataonao. Tsara izany ary noho izany dia nalefako ny fanarenana sy ny kinova 22 an'ny ROM. Saingy amin'ny tsy famafana, dia mbola mahazo rindranasa sinoa ihany koa aho, ary fampitaovana mampiahiahy be dia be. Ny zava-misy dia te hiala amin'ny terminal tanteraka aho ary manana fanontaniana. Azoko tsara fa tsy maintsy nanao ny namaoka aho, namafa ny fahatsiarovana anaty ihany koa, fa avy eo, ahoana no fomba ahafahako mampita ilay ROM tiako hipoitra raha toa ka nofafako ny fahatsiarovana anatiny? Azo adika avy amin'ny fanarenana mankany amin'ny telefaona amin'ny solosaina ve izany? Tokony hametraka mpamily amin'ny solosaiko ve aho amin'izany?
Misaotra betsaka mialoha amin'ny fiaraha-miasa.
Mamaly an'i Imanol
Ny fametrahana ny Rom amin'ny fomba madio dia tsy ilaina ny mamafa ny fahatsiarovana anaty. Ny fanaovana ny Wipes System, ny data, ny cache ary ny cache dalvik dia mametraka amin'ny fomba madio tanteraka. Raha te hamafa ny fitadidiana anaty ianao, izany hoe ny fitadidiana fitahirizana, ataovy izany raha vao manomboka amin'ny fametrahana madio ianao.
Misaotra betsaka anao Francisco!
Rahampitso tolak'andro Francisco, mila ny fanampianao maika aho satria tsy afaka mampiasa ny terminal-ko, nanaraka ny tutorial aho ary nanome ahy olana izay nanehoako hevitra tamin'ny hafatra iray hafa etsy ambany, miangavy anao aho mba hanampy ahy.
Miarahaba ary misaotra betsaka amin'ny fotoananao.
Salama, efa nijery ireo horonantsary fampianarana aho saingy misy zavatra tsy ananan'ny telefaoniko xiaomi mi 4c araka ny voalazanao tamin'ny horonantsary voalohany. Mihevitra aho fa efa miaraka amin'ny kinova eropeana fa misy fampiharana sinoa,
Ahoana no ahafahako manaisotra ny fampiharana sinoa ary mitazona ny findaiko manontolo amin'ny Espaniôla?
ny kinovan'ny findaiko dia, MIUI kinova 77.00.44.00 (LXKCN ary ny Android dia 5.1.1
Misaotra betsaka, ary nanazava tsara ny zava-drehetra.
Kico dia hoy izy:
Vantany vao vita ny fizotrany dia azonao atao ny manamboatra ireo fanavaozana omen'ny rafitra ???
Roa andro taty aoriana dia nisy nandositra ahy ny iray ary manome tsorakazo hamelezana azy aho, tsy ho zavatra kely fotsiny izany
Mamaly an'i Kico
Rafael de las Heras dia hoy izy:
Salama, ireto ROM ireto dia manan-kery ho an'ireo kinova roa 2 / 16GB sy 3 / 32GB, misaotra
Valiny tamin'i Rafael de las Heras
Nanaraka ny fanazavanao aho ary mety amiko ny finday lafo vidy, tsara lavitra noho ny teo aloha.
Tiako ny misaotra anao avy eto satria ho anao sy ho an'ny olona toa anao, amintsika izay tsy mahazaka telefaona finday tsara dia afaka mamaha olana mitranga izahay.
Zavatra farany iray raha afaka manampy ahy ianao, mahita ny fanavaozana ny findaiko, inona no hataoko ??? Manavao ??
Misaotra betsaka indray, sarobidy be ianao
Mazava ho azy fa afaka manavao miaraka am-piadanam-po tanteraka ianao sakaiza.
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny teny mahafinaritra nataonao.
Ilay bibikely nomeny ahy dia ny tsy fitehirizany ny fakana sary, maka azy io fa avy hatrany dia misy boaty volondavenona milaza fa tsy azo vonjy ny fisamborana noho ny olana amin'ny fitehirizana na ny fikirakirana ny fampiharana anao ... Vao avy nampidina ny rom 5.11.19 .XNUMX avy amin'ny rohy hafa raha sanatria ka simba ny rom ananako dia hanao cache hamafana aho ary hamerina ny rom hamantatra raha misy vintana
CachoNoob dia hoy izy:
Ny fampianarana tsara indrindra ho an'ny Mi4c hitako. Misaotra ny currada, ampahafantaro ahy rehefa mamoaka rom vaovao ry zareo! 🙂
Valio amin'i CachoNoob
Manome ahy ny lesoka hatrany aho: nijanona ny fampiharana google keyboard ary tsy mivoaka ny keyboard
Raha sanatria ka manampy anao ry Ivana dia voavahako tamin'ny alàlan'ny fametahana klavier hafa ary hanafoanana ilay google
Nataoko izany, nametraka ilay swiftkey aho, fa indraindray kosa dia very ny fifandraisana data, ary manandrana roms hafa aho ...
Salama hariva ry namana, efa narahiko ny fampianarana momba ilay taratasy ary efa manana ny findaiko amin'ny teny espaniola aho.
Manana olana lehibe aho hatrizay izao, manana hafatra diso roa isaky ny 3 segondra izay tsy azoko faranana ary milaza izao manaraka izao "Nijanona ny fizotran'ny android.prohib.m." Ataoko fa ho MEDIA io ary amin'ny iray hafa hoy izy " Ny fizotran'ny android.pr ilaina.ac dia nijanona .. "heveriko fa ho fotony io.
Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao satria tsy afaka mampiasa ny telefaona toy izany.
Misaotra betsaka amin'ny fotoananao ary antenaiko fa afaka manampy ahy ianao.
Nitranga tamiko koa izany ary tsy manazava izany ilay horonantsary. Rehefa manomboka ny fanarenana TWRP ianao dia mila miandry 20 segondra alohan'ny manomboka mamafa na mametraka ny rom. Hita fa mitaky fotoana ny famoahana entana (na dia toa tsy toa izany aza).
Efa nanandrana ny nolazainao tamiko aho ary tsy misy fomba anohizany manao toy izany koa, manandrana misintona ROM iray hafa aho hahitako raha toa ka raikitra io.
Ny olana iray hafa dia ny tsy fahafantaran'ny findaiko ny pc-ko ary tsy mandeha ny suite pc pc, ny iray izay mivoaka amin'ny findaiko dia amin'ny teny sinoa.
Handinika hatrany aho, na inona na inona mitranga dia reko daholo.
Salama, tolak'andro tsara, notanterahiko tsara ny dingana rehetra tamin'ny alàlan'ny fanatsarana faran'izay betsaka ny xiaomi Mi4c, ROOT, TWRP ary rom, fa rehefa nanao izany aho dia nahazo hafatra »Niato ny fampiharana Google Keyboard» ary tsy haiko izay azoko atao …… Mahamenatra satria efa nanao ny dingana rehetra araka ny voalazanao tao amin'ny horonantsary youtube… .Mahafaly ahy raha afaka manazava amiko ianao raha manana vahaolana ianao satria miantso telefaona aho nefa tsy afaka manaova zavatra… .satria raha tsy afaka miasa aho ny fitendry …….
Ana Belen dia hoy izy:
Salama! io maraina io aho vao nahazo ny ahy! Ny kinova 2 GB, efa tonga tamin'ny safidy Castilian aho ary miaraka amin'ny kinova miu v7 5.11.26 beta, ilaina ve ny nametrahako an'io efitrano io sy nametrako faka? tsy misy atahorana ny manafina ny telefaona manao an'izany?
Valiny tamin'i Ana Belen
Rosalia navarro dia hoy izy:
Tsara, efa narahiko ny dianao rehetra ary nandeha tsara ny zava-drehetra fa rehefa vitanao ilay horonantsary dia tsy misy fanavaozana miseho, na izany aza dia niseho tamin'ny findaiko io ary nomeko hanavao izany. Tsy haiko raha nanao ny tsara aho, ny kinova mivoaka dia Miui 5.12.17
Valiny tamin'i Rosalia Navarro
Antonio Escudero sary placeholder dia hoy izy:
Nanaraka tsara ny zava-drehetra aho, saingy rehefa manomboka indray dia manome ahy hadisoana mitohy ny hitory lesoka amiko satria tsy afaka namoaka tsara ny android ary tratra izy. Naveriko tamin'ny Miflash daholo ny zava-drehetra, ary tsy afaka mamerina ny fiteny Espaniôla aho.
Valiny tamin'i Antonio Escudero
Misaotra betsaka, tonga niaraka tamin'ny GearBest Trojan ny telefaona ary noho izany dia nanjavona izy ireo ary tonga lafatra. Tsotra sy haingana be daholo. Mirary ny soa indrindra.
Aorian'ireo dingana rehetra ireo, azonao atao ve ny mamafa ny rakitra ilaina amin'ny fakan-kazo sy ny hafa amin'ny fahatsiarovan-tena finday (TWRP, MIUI ROM, xiaomi_eu_multi… flashify ..)? Raha hamafana azy ireo aho, misy zavatra mitranga amin'ny terminal?
Misaotra betsaka amin'ny tutorial !! Vao avy nanao izany tamin'ny xiaomi mi4c vaovao aho. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izy io! 🙂
Etsy andanin'izay, ny vadiko dia manana ny xiaomi mi3w. Azonao ampiharina ihany ve ny fanatsarana izay nataoko tamiko?
Salama, nanana olana aho rehefa hanomboka ny horonantsary faharoa, tsy avelako hisintona ilay rakitra mega, mandefa ahy any amin'ny fivarotana izy ary milaza amiko fa very ny fifandraisana sy ny safidy hamerenana.
MariaMAc dia hoy izy:
Fahasoavana maro. Tena mora ny nanaraka azy
Valiny tamin'i MariaMAc
vNroot dia hoy izy:
Ny fizotrany dia miasa hatramin'ny 16/01/2016, tsy nahomby fotsiny aho ireo fanamarihana fangatahana fa nanome ahy lesoka tsy tapaka izany, fa kosa mandeha mankany amin'ny fikirana ianao ary mijanona ary mamafa azy
Valiny amin'ny vNroot
Tsy maintsy namerina nametraka Play Store ihany koa aho, misintona azy avy amin'ity rohy manaraka ity ary voila: https://console.cloud.google.com/m/cloudstorage/b/playapps/o/com.android.vending_6.0.5-80430500_minAPI9(nodpi).apk
Udrih10 dia hoy izy:
Rehefa avy nanao an'ity dingana ity aho dia mahazo fa ny rafitra dia misy fanavaozana ny rafitra avy amin'ilay mpanavao. Azo havaozina avy any ve izany na dia nanova ny rom aza isika?
Mamaly an'i Udrih10
Amin'ny fanakanana ny bootloader, inona no hitranga amintsika?
Vao nividy Xiaomi 4c aho ary tsy afaka mampifandray radio. Izay azoko atao.
Amanda dia hoy izy:
Tsy mety amiko ny rohy amin'ny dingana fahatelo !!!!
Valiny tamin'i Amanda
Ion dia hoy izy:
Salama, voalohany indrindra dia misaotra betsaka fa tsara ny tutorial.
Faharoa, satria tsy mandeha ny rohy fizarana faha-3 dia naka rom hafa aho fa tsy amin'ny Espaniôla izany. Ary amin'ny farany koa, tsy tsapako fa nanavao avy hatrany tamin'ny finday aho tamin'izay ananako ny kinova farany (7 heveriko) ary tsy mamela ahy handeha hamaky ity dingana ity intsony aho hanala an'io ary hametraka kinova amin'ny fiteny Espaniôla. A, ary ny toeram-pivarotana kilalao tsy mandeha amiko !!
Vonjeo azafady !!
Mamaly an'i ion
Crulis dia hoy izy:
Rohy ny dingana fahatelo nianjera
Valiny tamin'i Crulis
azafady ny rohy amin'ny dingana fahatelo dia manome lesoka
Manuel Limon (Chawe) dia hoy izy:
Salama daholo, manana olana kely aho lol, nataoko daholo ny lesona rehetra, ny dingana farany tsy fantatro hoe maninona aho no nanapa-kevitra ny hanao izany amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny telefaona ... ananako ilay telefaona amin'ny teny anglisy, tsy misy fidirana root (mahazo litera sinoa aho rehefa manome root fidirana amin'ny fiarovana) raha tsy sitrana aho ary tsy mandeha amiko ny google play ... inona no azoko atao? ampio !!! Hahaha
Valiny tamin'i Manuel Limon (Chawe)
Hantzo dia hoy izy:
Napetraka ary mihazakazaka amin'ny ondrilahy MI4c 32GB 3GB. Tsy mahita fampianarana an-tsipiriany toy izany isan'andro ianao. Misaotra!
Valiny tamin'i Hantzo
pablorr dia hoy izy:
Vao nahazo ilay MI4C 32gb 3 ram aho. Manaraka ny dingana rehetra aho ary ny flashify dia tsy mametraka tsara ary milaza amiko fa tsy hamaka. Rehefa ao anaty horonan-tsary vao tafapetraka ilay rindranasa dia miseho ny efijery maitso an'ny App ary manamarika telefaona 1, na izany aza, dia manamarika fiampangana 1. Miezaka mamelatra ilay twrp aho ary tsy avelany
Mamaly an'i pablorr
Ny ROM ho an'ny dingana fahatelo dia tsy hita. Fomba hafa?
Salama tsara, ny rohy ROM feno amin'ny horonantsary faha-3 dia milaza fa TSY FITIAVANA, azonao atao ve ny mampakatra indray sa aiza no ahazoako ny kinova farany amin'ny Espaniôla?
Mahazatra ny mikatso amin'ny dingana farany?
Salama maraina, mbola voasakana, misy fomba fanamboarana azy ve?
Ny rohy fampidinana ao amin'ny dingana 1 sy 3 dia tsy mandeha.
Azonao havaozina ve izy ireo?
Ny rohy fampidinana 1 sy 3 dia mbola tsy mandeha, araka ny nolazain'i Luis.
Miarahaba sy miarahaba ny asanao.
Salama maraina, rehefa te-hanavao ny xiaomi mi4c amin'ny dingana farany amin'ny tutorial aho dia tsy afaka namerina, niraikitra tamin'ny tandindona mi, misy manana vahaolana ve?
Nanandrana nitady tutorial aho fa tsy misy mandeha,
Azonao atao ny mijery ny rohy dw fa tsy misy ROOT rom
Toy izany koa no mitranga amiko, tsy azoko atao ny misintona rom izay manome alalana faka
Izaho ny dia hoy izy:
Tsy misy rohy ho an'ny rom iraisam-pirenena
Valio i Yoel
Nampiasako ity lesona ity ho an'ny xiaomi izay noraisin'ny zanako lahy tamin'ny volana janoary… sy ny sarimihetsika… saingy nangataka iray hafa aho… izay tonga tamin'ny volana martsa… ary hitako fa tsy mandeha io
ao amin'ny updater dia mahazo miui 6.4.14 aho ary na dia apetrako aza ny 5.10.8 ...
tsy misy ... ary avy eo tsy afaka mametraka flashify sy ny zavatra hafa rehetra aho
voasakana ve ny zavatra bootloader?
toni.catalan@hotmail.com dia hoy izy:
Tsy misy rakitra fisintomana ho an'ny ROm. Azonao alefa indray ve izy ireo sa hanamboatra ny rohy?
Valio amin'i toni.catalan@hotmail.com
Jhonatan Lagos Gutierrez dia hoy izy:
tsara maraina, tsara ny horonan-tsarinao! ampio aho azafady amin'ny zavatra azafady, nividy mi4c 16 gb aho ary manana olana amin'ny sim 2, ny fanontaniako dia samy miasa ny sim (dual sim) amin'ny refy rehetra omena amin'ny famaritana ireo fitaovana? sa misy miasa amin'ny refes matetika? Movistar 3g sy 2g eto amin'ny PERU dia miasa amin'ny 850 Mhz ary amin'ny sim tray 1 dia miasa amin'ny 3g izy, fa amin'ny sim tray 2 ao anaty 2g fotsiny, ity olana ity dia azo vahana amin'ny faka? misaotra betsaka mialoha.
Valiny tamin'i Jhonatan Lagos Gutierrez
Rous dia hoy izy:
Salama aho nividy xiaomi mi4c ary rehefa omeko ny fanavaozana dia milaza INSTALL A DATA EXPLORER VOALOHANY. Inona no azoko atao mba hahafahako mametraka browser ary mandeha tsara izy io?
Mamaly an'i Rous
YouTube Red, serivisy maimaimpoana premium an'ny YouTube, filalaovana tantara an-tsarimihetsika ary maro hafa
Tangram, tranonkala iray vaovao izay manaraka an'i Flynx sy Link Bubble ao anatin'ny fotony